समृद्धिको हवाई उडानमा | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो समृद्धिको हवाई उडानमा
on: १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०७:३४ तीतो मीठो
समृद्धिको हवाई उडानमा
देश समृद्धिको हवाई उडानमा छ । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिँदै गर्दा यति नै बेला हजारौं सरकारी कर्मचारी, मन्त्री आदि पनि कुनै न कुनै देशमा छन्, अर्थात् समृद्धिको उडान हेर्न विदेश गा’छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड गत साता मात्र दक्षिण र उत्तरको तीर्थाटन गरेर फर्किए । यता स्वदेशमा प्रदेशका मन्त्रीहरू ससानो कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पनि हेलिकोप्टरको उडानमा शयर गर्न सक्ने भएका छन् । यसै हप्ता पनि एउटा सामान्य मेला उद्घाटन गर्न कर्णालीका मन्त्रीहरूसहित मुख्यमन्त्री हेलिकोप्टरमा हुम्ला पुगे । यस्तो क्रम सङ्घीयता कार्यान्वयन भएयता जारी नै छ । यसले नेपालीको जीवनस्तर कति माथि पुगिसकेछ भन्ने मात्र देखाउ“दैन, जनताले कतिसम्म स्वतन्त्रता पाएछन् भन्ने पनि प्रस्ट पार्छ । त्यसैले त संविधान दिवसको दिन २ नम्बर प्रदेशमा मन्त्रीहरूसहित मुख्यमन्त्रीले सरकारी लगानीमै संविधानविरोधी कार्यक्रम गर्नेसम्मको स्वतन्त्रता पाए । यति स्वतन्त्रताले त समृद्धि पनि पक्कै ल्याउँछ ।
देश धेरै वर्ष ‘साइलेण्ट मोड’मा थियो । तर, ओली सरकार आउनेबित्तिकै त्यो ‘भाइब्रेण्ट मोड’मा गएको छ । यसरी देशलाई द्रुत गतिमा कुदाउन ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले के मात्र गरेको छैन ?
यो सरकार देशमा समृद्धि छिट्टै ल्याउन यति आतुर देखिन्छ कि यसले आफू सरकारमा गएयता गरेका निर्णयबाटै थाहा हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई सरकारले अयोग्य भनेर हटायो । तर, योग्य रहेको थाहा पाउनेबित्तिकै फेरि सोही पदमा तु बहाल गर्‍यो । त्यस्तै, २० वर्षे पुराना गाडी गुडाउन प्रतिबन्ध लगाएकोदेखि यातायातको सिण्डिकेट हटाएकासम्मका थुप्रै निर्णय पछि फेरि उल्टायो । निर्णय भनेको त यस्तो पो हुनुपर्छ त, छिटोछरितो । अनि न सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । पर्‍यो भने सरकार अघि बढ्छ, परेन भने तुरुन्तै सरकार पछि हट्ने निर्णय गर्न पनि बेर लाउँदैन ।
देश धेरै वर्ष ‘साइलेण्ट मोड’मा थियो । तर, ओली सरकार आउनेबित्तिकै त्यो ‘भाइब्रेण्ट मोड’मा गएको छ । यसरी देशलाई द्रुत गतिमा कुदाउन ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले के मात्र गरेको छैन ? ओली कहिले आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल त कहिले मौरी बन्न उत्साइरहेका छन् । उनी अरूलाई उत्साउने मात्र होइन, यो उमेरमा पनि आफू यति सक्रिय छन् कि करीब दुई/चार दर्जन संस्थाका उनी स्वयम् कुलपति र परमाधिपति बनेका छन् । लगानी बोर्डदेखि योजना आयोग, अब बन्ने नीति आयोगदेखि थिङ्क ट्याङ्कसम्म सबै प्रम कार्यालयकै मातहतमा ल्याएका छन् । अब यति गर्दा पनि देश समृद्धिको यात्रामा दौडेन भने दोष कसको हुन्छ ? सरकारको कि जनताको ?
तर, नेपाली जनता यति नकारात्मक सोचरूपी रोगले ग्रस्त छन् कि हरेक अभाव, बिग्रेको, भत्केको कुरामा सरकारलाई नै दोषी ठहर्‍याउँछन् ।
हेर्नोस् न पप्पुले पुल बनाउँदैन, दोष जति सरकारलाई । सडकमा खाल्डा पर्छन् दोष सरकारलाई । प्रहरी प्रशासनले गल्ती गर्छ, दोष सरकारलाई । शहरबाट फोहोर उठ्दैन, दोष सरकारलाई । बजारमा सामानको भाउ बढ्छ, दोष सरकारलाई । बलात्कारी भाग्छ, दोष सरकारलाई । सरकारलाई दोष किन ?
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त भनिसकेका छन् नि बलात्कार सरकारले गरेको होइन । उनका अनुसार देशमा बलात्कार तीन कारणले भएको रहेछ । त्यसमा पहिलो कारण हो, पूँजीवाद । हुन पनि हो, अमेरिकामा पो बलात्कार हुन्छ, चीन, उत्तर कोरिया, क्युबाजस्ता देशमा कहाँ त्यस्ता काम हुन्छन् र ? भए पनि बाहिर नआएपछि यहाँ जस्तो कसैले थाहा पनि पाउँदैन । अर्थात् त्यहाँ भए पनि ‘साइलेण्ट’ बलात्कार हुन्छ होला । यहाँजस्तो ‘भायोलेण्ट’ हुँदैन ।
बलात्कार हुने दोस्रो कारण इण्टरनेट हो रे ! अब गृहमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि होला पनि । इण्टरनेटबाट पोर्नसाइट बन्द गर्ने भनेका छन् क्यारे उनले । यसको मतलव अबका केही महीना उनी पोर्नसाइटको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनेछन् । किनकि, पोर्नसाइट चिन्न त्यति सजिलो छैन होला । त्यै भएर त चीनले पनि त्यस्ता साइट पूर्णरूपमा बन्द गर्न सकेको छैन ।
रक्सीले पनि बलात्कार बढेको ठोकुवा गृहमन्त्रीले गरेका छन् । उनले अनुसन्धान गरेर र आफ्नो अनुभवबाटै बोलेका होलान् । उनको उक्त भनाइबाट देशमा अब रक्सी उत्पादन, आयात, विक्री, वितरण, उपभोग सबै बन्दै होलान् भन्ने आशा गरौं । भलै रक्सी त परापूर्व कालदेखि पिउँथे क्यारे नेपालीले । कतिपय जातजातिमा त यो संस्कृतिकै एक अभिन्न अङ्ग हो । यसको मतलब रक्सीका कारण पहिले पनि थुप्रै बलात्कार हुने गर्थे । तर, ती सार्वजनिक नभएकाले हाम्ले थाहा पाएका रैन्छौं ।
जे होस् ढिलै भए पनि गृहमन्त्रीले बलात्कारको राज पत्ता लगाएछन् र अब त्यो रोक्लान् । गृहमन्त्रीले बलात्कारको राज पत्ता लगाएजस्तै अन्य मन्त्रीहरूले पनि समृद्धिका थुप्रै राज पत्ता लगाएको कुरा मन्त्रीले गर्ने भाषणहरूमा सुनिने गरेको छ । साथै, प्रधानमन्त्रीदेखि सङ्घीय मन्त्रीहरू, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमेतले छुट्टाछुट्टै रूपमा देशलाई समृद्धिको यात्रामा छिटो दौडाउन लागिपरेको छनक उनीहरूको बोली, व्यवहारबाट मिलिसकेको छ । किनकि, स्वयम् प्रम र मन्त्रीहरूले कुरा कम तर काम धेरै गरिरहेकै छन् ।
हुन पनि काम गर्ने मान्छेले कुरा धेरै गर्दैन, कुरा धेरै गर्नेले काम गर्दैन । काम गर्नैका लागि होला चुनावताका जस्तो प्रमले अहिले बोली हिँड्ने गरेका छैनन् । किनकि, हिजोआज उनी काममा निकै व्यस्त छन् । उनी अहिले राष्ट्रसङ्घीय महासभामा ‘भागाभाग’ लिइरहेका छन् । अस्ति महासभाको अघिल्लो साँझको एक कार्यक्रममा ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग २ मिनेट हो कि २ सेकेण्ड हो दर्शन भेट पनि पाएछन् । कस्तो अपूर्व भेट ! अमेरिकी राष्ट्रवादी नेतासँग नेपाली राष्ट्रवादी नेताको मिलन । मिलन होस् त यस्तो पो होस्, विकासका साक्षात् ब्रह्मसँगै भेट भएजस्तो भयो होला । अझ उक्त भेटमा हाम्रा प्रमले नेपालको समृद्धिको कुरा पनि राखेका छन् रे ! र, ट्रम्पले पनि हुन्छ भने रे भनेर उनीसँगै नगए पनि उनका प्रवक्ताले बताएको कुरा बाहिर आएको छ । यति भए’सि पुगिहाल्यो नि । त्यसैले, आशा गरौं, अब प्रम ओलीको नेतृत्वमा नेपालको समृद्धिले आफ्नो यात्रा बयलगाडाबाट होइन, बरु रेलको लिक हुँदै नयाँ उडान गर्नेछ ।
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:२७